दश वर्षदेखिको सपना पूरा, घर अगाडी राखियो यति ठूलो नेपाली झण्डा ! (भिडियोसहित) – Everest Dainik – News from Nepal
दश वर्षदेखिको सपना पूरा, घर अगाडी राखियो यति ठूलो नेपाली झण्डा ! (भिडियोसहित)
ईटहरी, साउन १५ । आफ्नो देशको झण्डा कसलाई मन पर्दैन होला र । हो सबैलाई मन पर्छ र आफ्नै छेउमा राखिरौं जस्तो लाग्छ । इटहरीमा एक व्यक्तिले पनि नेपालको झण्डाप्रति यत्तिनै सम्मान र माया देखाएका छन् । प्रदेश १ को इटहरी बजारमा निर्माणधीन एक भवनमा ठूलो नेपाली झण्डा बनेको छ ।
घरधनी खेमराज घिमिरेले आफ्नो नयाँ भवनमा यति ठूलो झण्डा बनाउन लगाएका हुन् । आफ्नो देशको झण्डा सबैले चिनुन् भनेर नयाँ घरको भित्तामा नेपाली झण्डा बनाएको उनले बताए ।
अहिले झण्डा लगभग पूरा बनि सकेको छ । घर पूरै निर्माण नभएकाले राम्रोसँग देखिदैंन । तर, घर निर्माणपछि झण्डाले प्रचार त पाउने नै छ आफ्नो घरले पनि घरले पनि फरक झल्को पाउने घरधनी घिमिरेले विश्वास लिए । देशप्रतिको माया तथा नेपाली झण्डाको प्रचारका निम्ती यस्तो काम गरेको उनको भनाई छ ।
एक महिना लगाएर घरको अगाडी पट्टिको भागमा झण्डा निर्माण भएको घिमिरेले जानकारी दिए । उनले १० वर्षअघि यस्तो सोच बनाएका थिए । नभन्दै उनले आज आफ्नो त्यो सोच पूरा गरेका छन् । झण्डाका विषयमा घरधनी घिमिरेसँगको थप कुराकानीका लागि यो भिडियो क्लिक गर्नुस्–
ट्याग्स: Itahari, Khemraj ghimire, nepali flag